Ogaden News Agency (ONA) – Xalaada boobka oo cirka isku sii shareeraya iyo Somaalida oo looga dayriyay inay sii joogan location-ka
Xalaada boobka oo cirka isku sii shareeraya iyo Somaalida oo looga dayriyay inay sii joogan location-ka
Waxaa habeenkii ay taariikhdu ahayd 12-06-2014 laysku dayay in la boobo dukaan uu lahaa ganacside Soomaali kadib kolkii ay koox qawlaysata ah oo South Africa ku soo uruureen goobta uu dukaanka kuyaalay . Waxaase arinta dabciyay kadib kolkii ay dhalinyaradii dukaan lahaa ay dhawaceen mid kamid ah kuwii boobka uyimid.
Waxaa sidoo kale meeshii soo gaadhay police iyo birmad soomali ah haseyeeshe police-kii ayaa wuxuu qab qabtay wiilshii Somaalida ahaa. Dukaankii waxaa soo badbaadiyay Soomalidii meeshi timid .
Waxaan maalintii ka hore oo ahayd khasmiista shir wada galay Soomaalida meheradaha lahayd, counsil-ka iyo police-ka . Shirkaas waxaa laga wada hadlay sidii xallada loo dajin lahaa . Dhinaca dowlada ooy mutalayneen labada kooxood ee danbe ayaa ku adkaystay in Soomaalida ay joojiso ganacsiga mudo 5 maalmood ah si xalaadu u degto. Inkastoo ay walaac ka muujiyeen Soomaalida ganacsatada ah, haddana wax kale oo la sameeyn karo majiro in ay aqbaalan mooye.
Arintan rabsahadu waxay bilaabeen maalintii Sabti ahayd ee tararrikhdu kubeegnayd 07/06/2014 waxaana dhalinyay kadib kolkii koox dhalinyaro ah ay damceen in ay alaab ayna gadanin la tagaan . Haseyeeshe waxa arintaas arkay wiil kamid ah kuwii ilaalada u ahaa dukaanka, oo markiiba kadhigay alaabtay wateen, waxaase dagaal bilaabay ninkii . arintaas waxay keentay in gacmaha la isula tago . waxa goobtaas lagu dhacay hal qof, waxaana ku dhintay muwaadin S.Ogadenya ah Allaha u naxariistee Shariif Shigri Shariif Cabdi iyo labo nin oo South Africa ah.
Boobku wuxuu bilaamay islaa maalintaas waxaa halkaas kadhacay rabshado aad u wayn . wuxuu galaftay in kabadan 76 Dukaan iyo 10 qof oo dhawaac ah, sida ay sheegaty Amnesty international . Xalada oo markii hore ubilaabatay si yar ayaa si dhaqso ah isu badahshay rabshado waaweeyn saamayaa dhuldhan ilaa 12 xafadood.
Arinta mudan xusind waxaa weeye rabshadaha ma soomaalidu sababteeda lahayd mise waa kuwo raad siyaasadeed dabada ku haya ? Dadka wax indha indheeya waxaa arintan dabada u saarayaan in ay tahay rabshado siyaasadaysan. Waxay u cuskanayaa hadal uu yidhi markii doorsahad lagu jiray Xogyahay guud ee uruurka African National Congress (ANC) “ Waxaan koobaynaa dukaamada ay ajnibigu leeyahy si aan u xoojino ganacsiga ay leeyihiin dadka wadaniga ah “.
Markaa aad fiiriso hadalada madax iyo ficil polic-ka wadanka oo markii rabshadu socdeen u diiday soomalida in ay gurtaan alaabtoodeed waxay ku tusaysaa in uu yahay ficil hoosta ka xidhiidh san . waana hawl u bahaan in soomaalidau si weyn ugu fikirto ka hor inta aan meesha lagu noqonin .